Sarkaal u dhashey dalka Mareykanka dhawaana kasoo baxsadey AL-shabaab oo dawlada federalka lagu wareejiyey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Sarkaal u dhashey dalka Mareykanka dhawaana kasoo baxsadey AL-shabaab oo dawlada federalka...
Sarkaal u dhashey dalka Mareykanka dhawaana kasoo baxsadey AL-shabaab oo dawlada federalka lagu wareejiyey.
Hay’ada Nabad-sugida Qaranka Somalia ayaa lagu soo wareejiyay maanta dagaal-yahankii Mareykanka ahaa ee dhawaan Al-shabaab kasoo baxsaday, iyadoo arrintan uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Somalia, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Dagaalayahankan oo Mareykan Madow ah ayaa lagu magacaabaa, Abdimalik Jones isagoo isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, isagoo ku sheegay wareysi uu bixiyay inuu naftisa kala soo cararay Al-shabaab, uuna isku soo dhiibay dowladda Somalia.
Sidoo kale, Jones ayaa ku sheegay sababta uu u soo baxday inay tahay muranka la xiriira kala aragti-duwanaanta soo dhexgashay Al-shabaab ee salka ku haysa in lagu biiro kooxda Daacish iyo in baaqi lagu sii ahaado ururka Al-Qaacida.
Maanta ayay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah ay kasoo qaaday Baraawe ninkan, iyadoo gacanta loo geliyay hay’adda nabadsugidda iyo sirdoonka Qaranka Somalia si ay su’aalo u weydiiyaan.
Wasiirka difaaca ee xukuumadda Somalia, Jen. C/qaadir Diini ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay maanta Muqdisho ayuu ku sheegay in ninkan u dhashay dalka Mareykanka ee ka tirsanaa Al-shabaab uu u isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ee degmada Baraawe ku sugan.
“Bishan lixdeedii ayuu ciidamada dowladda isku soo dhiibay ninkan, waana nin u dhashay Mareykanka oo muddo afar sano ah ka tirsanaa Al-shabaabka, wuxuuna sheegay inuu ka qayb-galay weerarro kooxda Al-shabaab ay ka fuliyeen dalka, maanta ayaana la keenay Muqdisho,” ayuu yiri Jen. Diini.
Dhanka kale, wasiirka difaaca Somalia ayaa xusay in Al-shabaab ay ku kala qeyb-sameen fikirka xagjirka ah ee ay ku doonayeen inay ku bulshada ku marin habaabiyaan, waxayna iminka kala sheegtaan inay u qaybsameen ISIS iyo Al-Qaacida.
“Xukuumadda Somalia waxay soo dhaweynaysaa qof walba oo ka tirsan Al-shabaab oo ka waantooba fikirka qaldan, waxaan ugu baaqayaa inay mar kale ka faa’iideystaan cafiska ah inay isaga soo tagaan Al-shabaab oo ay ka tanaasulaan dhibaateynta shacabkooda,” ayuu mar kale yiri wasiirka difaaca DF Somalia.
Ugu dambeyn, ma ahan markii ugu horreysay oo xubno ka tirsan Al-shabaab oo isugu jira Soomaali iyo Ajnabi ay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya, iyadoo ay horay isku soo dhiibeen xubno fara badan oo qaarkood weli gacanta nabadsugidda Soomaaliya ku jira.
Previous articleDawlad goboleedka Jubbaland oo ugu baaqdey Puntland in ay aqoonsato M/G deriska la ah eeG/mudug.
Next articleCiidamada milateriga kenya oo taba barkooda ay heshiis ku galeen ingiriiska iyo kenya.